I-Apple imemezela izinsuku ze-Apple Music Festival ezoba seLondon | Ngivela kwa-mac
I-Apple imemezela izinsuku ze-Apple Music Festival ezoba seLondon
U-Apple usanda kumemezela ngokusemthethweni izinsuku ze-Apple Music Festival elandelayo ezoba seLondon ngenyanga ezayo. Njengokwesiko eminyakeni yamuva nje, i-Apple izobamba wonke amakhonsathi eRoadhouse eLondon, njengonyaka odlule. Kulo nyaka izinsuku ze-Apple Music Festival zizoqala ngoSepthemba 18 kuya ku-30.
Ngonyaka odlule inkampani ezinze eCupertino yashintsha igama lale festival, nonyaka igubha uhlelo lwayo lweshumi, ukusuka kwi-iTunes Festival kuya ku-Apple Music Festival, ushintsho olunengqondo uma kubhekwa ukuthi kwakungonyaka odlule lapho i-Apple yethula khona insiza i-Apple Music yokusakaza umculo.
I-Apple Music ibuyela eLondon ngoSepthemba ubusuku obungu-10. Izakhamizi zase-UK zingawina amathikithi ekhonsathi. Bonke abasebenzisi be-Apple Music bazokwazi ukulandela wonke amakhonsathi mahhala ngokuphelele. Ukuthengiswa kwamathikithi kuzoqala kungekudala. Silandele ku @AppleMusic ngeTwitter nakuSnapchat ukuze kuze kube yiminithi lonke ulwazi oluhlobene nalo mcimbi nge-hashtag # AMF10.
Okwamanje asilazi igama labaculi noma amaqembu azobamba iqhaza kulolu hlelo olusha, kodwa njengoba izinsuku zihamba, amahemuhemu azoqala ukushicilelwa futhi sizokwazisa ngokushesha. Kusukela ngonyaka odlule, i-Apple inciphise inani lezinsuku elizinikezela kula makhonsathi omculo, kusukela ezinsukwini ezingama-30 zezinhlelo zokuqala eziyisishiyagalombili zaya kwezingu-10 kwezimbili zokugcina.
Insiza yomculo yokusakaza yakwa-Apple izuze abasebenzisi abangaphezu kwezigidi eziyi-15 ngemuva kokusebenza isikhathi esingaphezu konyaka, isibalo ebesingeke sibe sibi ukube bekungekhona ukuthi umncintiswano waso oqonde kakhulu usuthole cishe inani elifanayo labasebenzisi abakhokhelayo isikhathi esifanayo, unyaka owodwa.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Apple » Izaziso » I-Apple imemezela izinsuku ze-Apple Music Festival ezoba seLondon
Ufuna ukuvala ukuqinisekiswa okuzinyathelo ezimbili kwe-Apple ID? Sikukhombisa ukuthi ukwenze kanjani